Kedu ihe ntụgharị ihu igwe, otu esi eme ya na otu o si emetụta | Network Meteorology
Na troposphere, okpomọkụ na-ebelata ka anyị na-abawanye na elu. Yabụ, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị karịa na oyi na-atụkarị n'akụkụ ugwu karịa n'osimiri. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ihe ikuku nke na-eme ka mgbanwe na gradi a na-eme ka ọ gbanwee. A maara ya dị ka ntụgharị ihu igwe. Ọ bụ usoro nke okpomọkụ na-ebili na elu.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe ntụgharị ikuku dị, etu o si malite na otu o si metụta mmetọ ikuku.
1 Kedu ihe ntụgharị ihu igwe
2 Otu esi esi mepụta ikpo oku
3 Ihe kpatara ya
4 Otu Ntughari Si emetụta Mmetọ
Kedu ihe ntụgharị ihu igwe
Ọ bụ usoro nke okpomọkụ na-abawanye elu. Nke ahụ bụ, na mpaghara dịkarịsịrị ala nke obodo, dịka ọmụmaatụ n'oké osimiri, anyị na-ahụ obere okpomọkụ karịa ma ọ bụrụ na anyị arịgo ugwu. Ọ bụ ihe megidere ihe na-emekarị.
Igwe a na-ekpo ọkụ bụ n'ihi ụfọdụ ọnọdụ pụrụ iche nke ikuku oyi na-agbada ma na-adịgide adịgide. Ka anyị cheta ụfọdụ echiche ndị bụ isi gbasara ike ikuku. Mgbe enwere anticyclones ikuku na-agbada site na ọkwa dị elu na oke ifufe ọ na-eme ihe megidere. Na-arụ ọrụ gị ụzọ ka elu n'ígwé. Ntughari okpomoku na-eme na ọnọdụ anticyclone ma nwee oke ikuku ikuku.
Na ntụgharị ihu igwe anyị nwere ike ịhụ ka ikuku oyi site na oyi akwa dị elu na-agbadata na ala dị nso na ụwa. A maara ngagharị a nke ikuku oyi dị ka Nweta. N'ime oge ọdịda a niile, ikuku na-eme ka a na-emewanye ka ọ dịkwuo elu, na-eme ka nrụgide ya na-abawanye ma na-eme ka okpomọkụ ya dị elu. Ke adianade do, ọ na-efunahụ mmiri n'ihi ya ọ dịghị igwe ojii. Anyị nwere ike ịhụ otu, mgbe ọ ruru n’elu, ọ na-agbasa ma na-agbasa. Nke a na - eme ka ọ gbasaa n’elu ala ahụ niile na - eme ka akwụsie ike.
Otu esi esi mepụta ikpo oku
A na-egbochi mmegharị elu nke igwe ikuku n'ihi okpomoku ụwa yana ọ ga-ekwe omume enweghị ntụkwasị obi. Enweghị mmegharị ikuku ndị a na-egbochi igwe ikuku nke okpomọkụ dị iche iche ịgwakọta. Mgbe abali na-abịa ụwa tụfuru okpomọkụ ọ ruru n'ehihie n'ihi anyanwụ radieshon ngwa ngwa. A na-ebufe okpomọkụ a na ikuku nke na-emetụ ala. Ikuku oyi na-adị arọ nke ukwuu ma na-edebe ya na ndagwurugwu yabụ ya mere, n'ụtụtụ, okpomoku na-ajụkarị oyi.
Ekwesiri icheta na n 'onodu ndi a nke ikuku na ikuku na-agbada site na oyi akwa di elu ma kpoo oku ka ikuku oku we di n'elu ikuku oyi. Nke a na - akpata plọg ma ọ bụ mkpuchi ga - etolite. Ebe ọ bụ na a na-egbochi mmegharị elu nke ikuku kpamkpam ebe ọ bụ na enweghị ikuku ọ bụla nyere nnukwu nkwụsi ike, ndị a nwere ụdị agwa dị iche iche anaghị agwakọta ma ya mere ihe ntụgharị nke ikpo ọkụ na-eme.
Ihe kachasị mma bụ na ikuku ikuku na-agbada na elu, ma na nke a enwere ntụgharị ikuku.
Iji mee ka mgbanwe ikuku na-eme, ọnọdụ dị iche iche ga-emerịrị. N’abalị, elu ụwa na-ajụ oyi ngwa ngwa, na-efunahụ okpomọkụ niile ọ kpatarala n’ehihie. Igwe a nke ikuku nwere okpomọkụ dị ala karịa nke dị elu ozugbo. Nke a pụtara na ikuku nwere ọtụtụ njupụta, nke na-egbochi ha ịgwakọta. Ka anyanwụ na-apụta ọzọ ọ na-amalite idozi ntụgharị ihu igwe nke ọma ma ọ na-esi isi iji kpoo elu ụwa, weghachite ọnọdụ ndị dị mma.
Ihe omume a na - eme na mpaghara ndagwurugwu dị ka ihe dị jụụ site na irradiation ka ukwuu. Ọ bụrụ na enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti oge ehihie na abalị, ntụgharị ihu igwe nwere ike yikarịrị. Mgbe enwere okpukpu okpomoku ọ na-adị mfe ịmata. Ihe kpatara ya bụ na anwụrụ ọkụ ma ọ bụ anwụrụ ọkụ na-etinyekarị uche na gburugburu ụwa. ma gbatịa ịgbasa. Ọ na-adịkarị na mpaghara mmiri na mpaghara ndagwurugwu. Ọ na-apụtakarị na mpaghara ebe, n'ihi morphology, mgbasa ikuku nkịtị na-esiri ike.
Otu Ntughari Si emetụta Mmetọ
Anyị ekwuola na n'oge usoro ntụgharị nke ikuku na-eme ka ikuku nke ikuku dị na mbara ala. Nke a oyi akwa mejupụtara oyi ikuku na bụ denser na-anọ na ala oyi akwa. Nke a na-eme ka ọ ghara ikwe omume ijikọta ikuku abụọ nke ikuku nwere njupụta dị iche iche mgbe ha nwere okpomọkụ dị iche iche. Yabụ, ọ dị mfe ikwubi na otu isi ihe ntụgharị ihu igwe nwere ike ibute bụ nke ahụ mmetọ a tọrọ atọ n’elu ala n’enweghị ohere ịgbasasị ikuku.
Dị ka ọ na-adịkarị, ikuku na-arị elu ma na-enye anyị ohere ịgbasa mmetọ ikuku site na mpaghara ndị dị ala. Otú ọ dị, na ntụgharị ihu igwe, ọnọdụ okpomọkụ dị elu dị ka ihe mkpuchi n'elu ikuku oyi nke na-akpakọrịta na ala. Nke a bụ ebe a na-echekwa ọtụtụ ihe mmetọ. Otu n’ime ihe ga-esi na ya pụta ozugbo bụ anwụrụ. Enwere ike ihu akwa mmetọ a site na ọtụtụ kilomita ma na-edugakarị nbelata ogo ogo ikuku.
A na-atụgharị nsonaazụ na ahụike mmadụ nke ihe a ka ọ baawanye na nyocha ahụike n'ihi nsogbu iku ume na obi. Ekwesiri iburu n'uche na iku ume ikuku na-emetuta ndi mmadu dika ndi oria, ndi okenye ma obu umuaka. Ma ọ bụ na ọkwa nke nitrogen dioxide na sọlfọ dioxide na-echekwa n'oge oge ntụgharị ihu igwe. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ntinye micron 10 na 2.5 na-etinye uche ma banye n'ime akpa ume alveoli.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe ntụgharị nke ikpo ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Usoro okpomọkụ